Smartstreets-Cyclepark™ Bisikileta Fiovam-Po - Famolavolana
Bisikileta Fiovam-Po Ny Smartstreets-Cyclepark dia toeram-pivarotana bisikileta marolafy ho an'ny bisikileta roa izay maharitra ao anatin'ny minitra vitsy ahafahan'ny fanatsarana haingana ny toeram-pijanonan'ny bisikileta manerana ny faritra an-tanàn-dehibe nefa tsy manampy fifangaroana amin'ny sehatry ny arabe. Ny fitaovana dia manampy amin'ny fampihenana ny halatra bisikileta ary azo apetraka amin'ny arabe tery kokoa, ary manafaka ny sanda vaovao avy amin'ny fotodrafitrasa efa misy. Vita vita amin'ny vy vy ny fitaovana dia mety ho lokon'ny loko RAL sy marika ho an'ny manampahefana eo an-toerana na mpanohana. Azo ampiasaina ihany koa hanampiana amin'ny famantarana ny lalan'ny Cycl. Azo averina arakaraka ny habeny na ny andalana tsanganana.
Anaran'ny tetikasa : Smartstreets-Cyclepark™, Anaran'ny mpamorona : SMARTSTREETS LTD, Anaran'ny mpanjifa : Cities, Councils and Municipalities.
Fitaovana fanaka an-dalambe
Bisikileta Fiovam-Po SMARTSTREETS LTD Smartstreets-Cyclepark™